5 तपाईंलाई इटाली यात्रा गर्न आवश्यक चीजहरू – Vocre
वास्तबमा, धेरै व्यक्तिले केहि चीजहरू सोच्दैनन् जुन उनीहरू आफैंले ल्याउनु पर्छ.
उदाहरण को लागी, इटालियन चिन्दैन? तपाईं रोम वा नेपल्समा अर्को भाषा बोल्न पुग्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाइँ "बुट को हील" मा जान,”वा पुगलिया, तपाईं सँग एक भ्वाइस अनुवाद अनुप्रयोग ल्याउन चाहानुहुन्छ.
यदि तपाईं इटाली यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको यात्रालाई रमाईलो बनाउनको लागि तलका चीजहरू ल्याउन नबिर्सनुहोस्:
1. इलेक्ट्रिक एडाप्टर र कन्भर्टर
इटाली छ तीन मुख्य प्लग प्रकारहरू: C, F र L. यदि तपाईं संसारको विभिन्न भागबाट हुनुहुन्छ, तपाईंको प्लग सम्भवतः इटालीमा काम गर्दैन. तपाईंले पाउनुहुनेछ कि भोल्टेज २0०V र H० हर्ट्ज हो. यसको मतलब के हो?
तपाईंलाई दुबै एडेप्टर चाहिन्छ र एक कन्भर्टर.
एडाप्टरले तपाईंलाई इटालीमा तपाईंको परम्परागत प्लग प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ. एक कन्भर्टर अझ महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो आउटलेटबाट ऊर्जालाई तपाईंको भोल्टेजमा रूपान्तरण गर्न जिम्मेवार छ किनकि तपाईंको उपकरणहरू ठीक ढ run्गले चल्नुपर्दछ।.
यदि तपाईं कन्भर्टर प्रयोग गर्नुहुन्न भने, संभावना छ, तपाईंको इलेक्ट्रोनिक्स पूर्ण रूपमा छोटो हुन्छ. त्यसो भए, यदि तपाईंसँग पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलो फोन वा ल्यापटप छ, तपाईं यसलाई "अलविदा" भन्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं कन्भर्टर प्रयोग गर्नुहुन्न.
जब तपाईं एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंले सम्भवतः ट्याक्सी लिनुपर्नेछ तपाईंको होटल कोठामा पुग्न. जबकि अधिक व्यवसायहरूले क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्दैछन्, त्यहाँ धेरै छैन. इटालेलीहरू कार्ड स्वीकार्नका लागि थप शुल्क तिर्न मन पराउँदैनन्.
तपाईं इटालीमा तपाईंको पहिलो चरणहरू भन्दा पहिले केहि युरोको लागि आफ्नो मुद्रा साटासाट गर्न चाहानुहुन्छ.
एटीएम मेशिनहरूले प्राय: तपाईंको डेबिट कार्ड लिन्छ र तपाईंलाई युरोमा तपाईंको केही ब्यालेन्स फिर्ता लिन मद्दत गर्दछ. तपाईं इटाली जानु अघि बैंकलाई सूचित गर्न निश्चित हुन चाहानुहुन्छ ताकि उनीहरूले तपाईंको निकासीलाई शंकास्पद ठानेन र तपाईंको खातामा समात्नेछन्।.
3. आवाज अनुवाद अनुप्रयोग
इटालियनहरू बोल्छन् इटालियन. तपाईं टुर गाइड प्रयोग गरेर र होटलमा रहन स्टाफ इटालियन बोल्ने ठाउँमा टाढा जान सक्षम हुनुहुनेछ, तर यदि तपाईं यी क्षेत्रहरू बाहिर खोज्नुहुन्छ भने, तपाईंले अनुवाद अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुपर्दछ.
Vocre एक अनुवाद अनुप्रयोग हो जुन उपलब्ध छ गुगल प्ले र App Store.
र तपाईं इटालियन बोल्नुहुन्न, तपाईं अनुप्रयोगमा तपाईंको मातृभाषा बोल्नुहुनेछ तत्काल आवाज अनुवाद. अनुप्रयोगले तपाइँको मातृभाषामा इटालियन वा कुनै पनि पछाडिको कुरा गर्नुभयो 59 भाषाहरू जुन सजिलै भोक्रे प्रयोग गर्न अनुवाद गर्न सकिन्छ.
यदि तपाइँ एक चिन्ह देख्नुहुन्छ वा मेनु पढ्न मद्दतको आवश्यकता छ भने, त्यहाँ पाठ अनुवाद विकल्प पनि उपलब्ध छ. तपाईंलाई अनुप्रयोगको सदस्यता सेवासँग इन्टरनेट जडान पनि आवश्यक पर्दैन.
4. पोशाक लुगा - तपाईको सर्वश्रेष्ठ
यदि तपाईं इटालीमा बस्नुहुन्न भने, तपाईं मान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं आफ्नो दिन को दिन को कपडा मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तिमी सक्छौ, तर तपाईं स्थान बाहिर देख्नुहुनेछ. चाहे तपाईं एपीरिटिवोका लागि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ (पिउनु) वा खानको लागि, तपाईंले त्यो ट्र्याटोरियामा पनि पाउनुहुनेछ (सस्तो रेस्टुरेन्ट), मान्छे को लुगा धेरै राम्रो.
ड्रेस जुत्ताको राम्रो जोडी ल्याउन निश्चित हुनुहोस्, प्यान्ट र एक बटन-डाउन शर्ट एकदम कम्तीमा यदि तपाईं ओछ्यानबाट पल्टेको जस्तो देखिन चाहानुहुन्न र डिनरमा जानुहुन्छ भने.
5. आरामदायक जुत्ता
पैदल यात्रा इटालियन यात्राको एक हिस्सा हो, तपाई धेरै हिड्ने योजना बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन. परम्परागत रूपमा, पर्यटकहरू उठ्छन्, केहि लिनको लागि समात्नुहोस् र दृश्यहरूको भ्रमणको लागि उनीहरूको मार्गमा जानुहोस्. र इतिहासले भरिएको देशको साथ, एउटा ऐतिहासिक स्थान अर्कोमा मिल्दो देखिन्छ र तपाईं आफैंमा हिंडिरहेको पाउनुहुनेछ धेरै.
यदि तपाईं बजार अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फेरि हिंड्नुहुनेछ.
आरामदायक जुत्ता वा स्नीकर्सको एक जोडी ल्याउनुहोस् जुन तपाईं अन्तमा घण्टासम्म लगाउनुहुन्न. मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईंको खुट्टाले तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छ यदि तपाईंसँग राम्रो जोडी हिंड्ने जुत्ता छ भने,
अर्को पटक तपाईं इटालीको लागि यात्रा, यस सूची अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईं छुट्टी समयमा एक धेरै राम्रो समय हुनेछ.